तौल घटाउने पेयपदार्थ : यी ३ घरेलु ड्रिंक्सले घटाउछ तौल, पग्लने छ पेटको बोसो | Seto Khabar
२०७९ बैशाख १७, शनिबार (२ हफ्ता अघि)
काठमाडौँ । आजभोलि हामी आफ्नो स्वास्थ्य र जीवनशैलीप्रति निकै लापरवाही गर्नै गछौँ । जसका कारण हाम्रो शरीरमा यस्ता परिवर्तन आउँछन् जुन हामीलाई मन पर्दैन । अस्वस्थ जीवनशैली र केही खराब बानीका कारण उत्पन्न हुने यस्ता समस्या मध्ये मोटोपन पनि एक हो । यदि तपाईंको तौल नियन्त्रणमा छैन भने शरीरको मेटाबोलिज्म राम्रो हुँदैन भन्ने पनि हुन सक्छ।
धेरै पटक व्यस्त जीवनमा हामी व्यायाम वा कसरतका लागि समय निकाल्न सक्दैनौं। तर, अहिले आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन। केही पेय पदार्थ पनि छन् जुन पेय पदार्थ पिएर छिटो तौल घटाउन सक्छ। सबैभन्दा राम्रो कुरा के हो भने उनीहरुलाई तयार पार्न निकै सजिलो छ।
तपाईंको दैनिक भोजनमा बटरमिल्क समावेश गर्नुपर्छ किनभने स्वास्थ्य विशेषज्ञहरूका अनुसार यो तौल घटाउनको लागि रामवाण हो। यो क्यालोरी एकदमै कम हुन्छ, यसले पेटलाई चिसो हुन्छ र मेटाबोलिजम बढाउँछ। हरेक दिन यसलाई पिउँदा शरीरमा रहेको बोसो दिनानुदिन पग्लन थाल्छ । बटरमिल्कमा चिनीको मात्रा खासै हुँदैन। चिनीको सेवनले मोटोपना बढ्न सक्छ भन्ने कुरा हामी सबैलाई थाहा छ।
२. पानी भएको तुलसी बीउ
यदि तपाईं पेटको बोसो छिटो पगाल्न चाहनुहुन्छ भने तुलसीको बीउको सेवनले तपाईंले चाहेको रिजल्ट ल्याउन सकिन्छ । यसलाई तरकारीको बीउ पनि भनिन्छ। यसमा भिटामिन ए, भिटामिन बी, भिटामिन ई, भिटामिन के र ओमेगा–३ फ्याटी एसिडजस्ता आवश्यक पोषक तत्व पाइन्छ । यदि यो बिउ पानीसँग मिसाएर पिउने हो भने तपाईलाई लामो समयसम्म भोक लाग्दैन र तौल पनि घट्न थाल्छ ।
३. तातो पानी र कागती
बिहान उठेर एक गिलास मनतातो पानीमा कागतीको रस निचोरेर पिउने हो भने पेटको बोसो छिटो कम गर्न मद्दत मिल्छ । यसले शरीरमा पानीको कमी मात्र होइन शरीरमा पाइने विषालु पदार्थ हरुलाई पनि चाँडै बाहिर ल्याउन मद्यत गर्दछ । यस पेय पदार्थद्वारा मेटाबोलिज्म बढाइएको हुन्छ जुन तौल घटाउने एउटा ठूलो कारण हो। लेमनमा फ्लेभोनोइड, भिटामिन सी, फोलेट र पोटासियम जस्ता आवश्यक तत्वहरू हुन्छन् जुन स्वास्थ्यको लागि अत्यन्त लाभदायक हुन्छ।